Japanese Bobtail, bisad ilbaxeed aad u jecel oo jacayl badan | Bisadaha Noti
In kasta oo magacu kugula muuqdo wax yaab leh, hubaal haddii aad tahay taageere bisadaha waad arki doontaa ama maqli doontaa noocyadan gaarka ah. Qaar ka mid ah gobollada waqooyiga ee Japan, waxaa loogu yaqaanaa kuwa bisadaha nasiib badan. Halkaas waxay ku noqdeen astaanta bisadda caanka ah ee saddex-geesleyda ah oo adduunka oo dhan martay, Maneki-neko, Mukulaasha kor u qaadaysa bawdada hore una dhaqaajisa sidii iyadoo ruxaysa.
El Bobtail Jabbaan Waa dhogor qurux badan oo kalgacal leh oo si qumman ugu noolaan kara guri, maaddaama baahiyadeeda jimicsiga aysan ka sarreyn sida kuwa, tusaale ahaan, Bengal. Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato noocyadan quruxda badan? Ha joojin akhriska.
1 Asalka iyo taariikhda Jabbaan Jabbaan
4 Sidee loo daryeelaa bisadda Bobtail ee Japan?
5 Halyeeygii Jabbaan Jabbaan
Asalka iyo taariikhda Jabbaan Jabbaan
In kasta oo asalka wali aan la hubin, hadana waxaa la rumeysan yahay yimid qaaradda Aasiya qiyaastii 1000 sano ka hor. Aragtida ugu aqbalsan waxay sheegaysaa inay asal ahaan ka timid jasiiradaha Kuril, waana inay ku timid Japan doon.
Qiyaastii sanadkii 1602 iibsashada, iibinta ama haysashada bisadda bobtail waa laga mamnuucay JapanQof kasta oo la helo waa in la siidaayo si tirada jiirka ee wax u dhimayay warshadaha bariiska iyo xariirta loo ilaaliyo in lagu hayo. Ka dib markii la xaliyay dhibaatadan halista ah, bisadahaani waxay noqdeen bisadaha caanka ku ah dalka.
Sanadkii 1968 Elizabeth Freret iyo Lynn Beck waxay u soo bandhigeen Mareykanka, halkaas oo ay ka gaari karaan Yurub iyo adduunka intiisa kale.
Bobtail-ka Jabbaan waa bisad cabirkeedu dhexdhexaad yahay oo lagu garto ayada dabo gaaban Waxay leedahay qaab qaab fiiq ah oo u gaar ah, laakiin qaab ahaan u siman. Haddii aad ka fiirineyso meel fog, waxay u badan tahay inay umuuqato kubbad aad u qurux badan oo timo leh, laakiin aad ugu dhow, waxaad awoodi doontaa inaad falanqeyso muuqaalkeeda quruxda badan ee ka dhigaya mid gaar ah.
Madaxa waa inuu sameeyaa saddexagal isu eg, oo dhegaha iyo indhaha kala fog yihiin. Lugahoodu waa kuwo adag oo isboorti ah. Isaga jidhku waa caato iyo muruq, waxaana lagu ilaaliyaa lakab timo oo dherer iyo gaabnaan kara.
Waxay leedahay miisaan ku saabsan 4kg iyo rajada nolosha ee 18 sano.
Bobtail-ka Jabbaan waxaa lagu gartaa ahaansho firfircoon oo dhaq-dhaqaaqa; Xaqiiqdii, in kasta oo bisadaha oo dhami ay yihiin kuwo xiiso badan oo firfircoon, haddana wuu ka sii badnaan karaa, sidaa darteed aad buu u yara seexanayaa bisadaha dhogorta badan leh.
Waxay si fudud ula qabsataa xaalad ama khibrad cusub. Si la mid ah waxay si fiican ula qabsaneysaa shirkadda dadka cusub iyo xayawaannada kale, sidaa darteed wax dhib ah kala kulmi mayso haddii ay tahay inaad ka tagto oo aad meel kale uga tagto intaad soo noqonayso. Isagu waa nin aad u jecel oo ciyaar badan, taas oo ka dhigaysa isaga shirkad aad u fiican.
Sidee loo daryeelaa bisadda Bobtail ee Japan?
Waxaa jira noocyo badan oo quudin ah oo si heer sare ah loogula taliyo Bobtail-ka Jabbaan, sida Acana, Orijen, Ownat hats-free, ama Dhadhanka Duurjoogta. Kuwan oo dhami waxay leeyihiin astaamo guud: iyagu malaha badarka, laakiin waxay leeyihiin qaddar badan oo hilib / kalluun ah, markaa shaki la'aan dhogortaadu waxay yeelan kartaa koritaan iyo horumar sax ah, iyo sidoo kale dayactir wanaagsan.
Maalin kasta waa muhiim in la cadayo si wasakhda looga ilaaliyo. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad hubisaa in labada indhood iyo dhagooduba nadiif yihiin, maxaa yeelay haddii kale waxay noqon kartaa calaamado jirro.
Guud ahaan waa bisad aad u caafimaad badan, laakiin way yeelan kartaa kubadaha timaha. Si looga hortago tan, marka lagu daro cadayashada maalin kasta, waxaa aad loogula talinayaa inaad cadayato maalin kasta FURMIYE, taas oo ah shanlo ficil ahaan ka saarta timaha dhintay oo dhan, xoogaa yarna galiya buunshaha bisadaha maalintii hal mar baabkeeda.
Halyeeygii Jabbaan Jabbaan
Dhogortaani waa quruxsan tahay, sax? Haddii aad weli rabto inaad waxbadan ogaato, mid baan kuu sheegeynaa halyeey japanese taas oo ku saabsan taranka this. Wuxuu sheegayaa in habeen jiilaal ah bisad ay seexatay dab agtiisa. Markuu nastay, dabadiisu waxay bilaabatay inay gubato.
Markii uu taas gartay, aad ayuu u baqay oo wuxuu ku orday magaalada oo dhan isagoo ololkii sii fidinaya, taasoo keentay in guryo badan dambas ku hadhaan. Intaa ka dib, Imbaraadoorku wuxuu amar ku bixiyay in dabada laga wada jaro bisadaha oo dhan si looga fogaado nasiibdarro badan.
Sida halyeeyada oo dhan, waxaa jira wax run ah iyo wax aan ahayn. Midkan gaar ahaan, waxay u badan tahay inuu dab ka kacay magaalo ama tuulo, laakiin ma rumaysanayno inuu ka dhashay bisad. Weli, tarankaani quruxda badan ayaa la jecel yahay cidda leh hubaal waxaad ku noolaan doontaa ugu fiican 18 sano noloshaada .
Haddii si kasta oo aad uga fikirto, aad rabto bisad Japanese ah oo loo yaqaan 'Bobtail cat' inay qayb ka noqoto noloshaada, waxay kuu sheegaysaa in qiimaha eeyadu ay ku dhowdahay 500 euros. Qiimahaasi wuu yara yaraan karaa haddii aad ka helayso dukaanka xayawaanka.
Si aan u dhammeyno, waxaan ku soo lifaaqnay sawirro taxane ah oo ah Bobtail-ka Japan, oo ka mid ah kuwa ugu caansan ugaarsiga:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Japanese Bobtail, bisad caan ah oo aad u jecel bisad Oriental ah